Dawladaha Mareykanka iyo Ruushka oo hashiis kala saxiisday – STAR FM SOMALIA
Dawladaha Mareykanka iyo Ruushka oo hashiis kala saxiisday
Wadamada Mareykanka iyo Ruushka, ayaa waxay Talaadadii kala saxiixdeen heshiis dhigaaya weerarada dhinaca cirka ah ee labada dal ka wadaan dalka Suuriya, si looga fogaado inay isku dhacaan diyaaradahooda dagaalka.
Labada dhinac, ayaa waxay ku heshiiyen inay iska warqabaan oo ay isla socdaan, kolka ay weerarada cirka ku qaadayan dhulka ay gacanta ku hayso Daacish, oo isu magacawday Dowladda Khilaafada Islaamka.
Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka (Pentagon), Peter Coook oo Saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay in heshiisku uu ku qotomo in si hufan kaga hawlgalaan hawada Suuriya, xilliyada ay weerarada ka fulinayan.
Afhayeenka, ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay isku afgarteen in la sameeyo khad ay ku wada xiriiraan labada dhinac, inta ay soconayan duqeymaha ka dhanka ah Ururka Daacish.
Wasiir Ku Xigeenka Gaashaandhiga Ruushka, Anatoly I. Antonov, ayaa sheegay in heshiisku uu qayb ka yahay xayiraado la samayn doono, iyadoo markaasi looga hortagaayo inay isku dhacaan diyaaradaha.
Sidoo kale waxa uu heshiiskan uu ku tilmaamay mid muhiimad la taaban karo u leh labada dhinac, oo si weyn kaga soo horjeeda jiritaanka Ururka Daacish.
Diyaaradaha dagaalka Ruushka, ayaa si isku mid ah u garaacaya fariisimaha ay dalkaasi ku lee yihiin xoogaga hubeysan, ee dagaalka kula jira Dowladda Bashar al-Assad.
Duqeymaha uu Ruushku ka wado Suuriya oo galay toddobaadkii saddexaad, ayaa waxay Ciidanka Dowladdu ka caawiyen inay dib u qabsadaan dhul ballaaran, oo ay horey kaga qabsadeen dhinacyada ka soo horjeeda, oo ay ku jiraan Ciidanka Xorta Suuriya oo taageero ka helaya Wadamada Reer Galbeedka & Carabta.
Ban Ki-moon oo safar kedis ahaa ku tagey Daanta Galbeed, si xal uu ugu raadiyo Falastiin iyo Israel